आज भारत र पाकिस्तान बिच घमासान खेल हुदै: कसले मार्ला बाजी? - Laltin.com
Home » Posts page » आज भारत र पाकिस्तान बिच घमासान खेल हुदै: कसले मार्ला बाजी?
By लाल्टिन डट कम October 24, 2021 Updated: November 22, 2021 No Comments2 Mins Read
आज टी-२० विश्वकपमा समहु २ को पहिलो खेल भारत र पाकिस्तानबिच हुन गैराखेको छ। युएइको दुबै अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा हुन लागेको खेल नेपाली समय ७:४५ बाट सुरु हुनेछ। खेल धेरैनै रोमान्चक हुने अनुमान गरिएको छ। यी दुइ टीम बिच अन्तिम पटक खेल २०१९ को विश्वकपमा भएको थियो, जहाँ भारतले पाकिस्तानलाइ ८९ रनले जितेको थियो।
पाकिस्तानले अहिले सम्म पनि भारतलाई विश्वकपमा हराउन सकेको छैन। पाँच पटक यी दुइ टीम बिच विश्वकपमा खेल भएको छ, जसमा पाँचै पटक भारत बिजेता बनेको थियो। हेर्नुहोस यी दुइ टीम बिचको इतिहास।
२००७ विश्वकपः २००७ टी-२० को पहिलो विश्वकप थियो जुन दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना भएको थियो। पाकिस्तान र भारत समहु डि मा थिए। उनिहरुबिच डरबन मैदानम भएको समुह खेल बराबरी मा रोकिएको थियो। बल आउट गरेर (३-०) भारत ले उक्त म्याच जितेको थियो। सोहि विश्वकपमा भारत र पाकिस्तानको भेट फाइनल खेलमा भएको थियो। फाइनल खेलमा निकै थ्रिलर तरीकामा भारतले पाकिस्तानलाइ अन्तिम ओभरमा ५ रनले जित्न सफल भएको थियो। १५७ रनको टार्गेट पाएको पाकिस्तान १९.३ ओभरमा १५२ रनमा अलआवट भएको थियो।
२०१२ विश्वकपः २०१२को विश्वकपमा भारतले पाकिस्तानलाइ सजिलै गरी ८ विकेटले जितेको थियो। १२८ रनको टार्गेट पाएको भारतले १७ ओभरमानै खेल जितेको थियो।
२०१४ विश्वकपः २०१४ को विश्वकपमा पनि भारतले पाकिस्तानलाइ सजिलै गरी ७ विकेटले जितेको थियो। १३० रनको टार्गेट पाएको भारतले १८.३ ओभरमानै खेल जितेको थियो।
२०१६ विश्वकपः २०१२को विश्वकपमा भारतले पाकिस्तानलाइ ६ विकेटले जितेको थियो। ११८ रनको टार्गेट पाएको भारतले १५.५ ओभरमानै खेल जितेको थियो।
यसरी समग्रमा हेर्दा विश्वकपमा पाकिस्तान माथि भारत हाबि हुने गरेको छ। यसपटको को विश्वकपमा पाकिस्तान बाट हेर्न लायक ब्याट्सम्यान बाबर आजाम हुनेछ्न् । बाबर आजाम पाकिस्तान टीमका क्यापटेन पनि हुन्‌। त्यसैगरी भारत बाट पनि हेर्नलायक ब्याट्सम्यान क्यापटेन बिराट कोहोलि हुनेछ्न् ।